Khangela ubuchule beetayiti ze-fallopian
Ukuqandwa kwamathambo e-fallopian kungaholela ekungabikho komntwana. Isizathu sokwephulwa okunjalo sinokutshabalala kwamalungu enxalenye ye-pelvic, zombini isisigxina kwaye singapheliyo, iintlobo ezahlukeneyo ze-endometriosis zomzimba, izenzo, zombini kwizitho zeplavic kunye nakwamalungu omzimba wesisu.
Izindlela zokuvavanya ukuvinjelwa kwamathambo e-fallopian
Ngethuba le nkqubo, i-20-40 ml ye-stery yarn. isisombululo (isisombululo se-5% se-glucose, kodwa i-polyglucin engcono). Isigaba sesisombululo esisetyenzisiweyo ngokusebenzisa iibhulo ezikhohlakeleyo sihlolisiswa ngeendlela zokutshintshwa kwe-ultrasonic. Ukukhangela kwenzeka kwizinga lemvelo. Isisombululo esinyumba esithe sityhala kwisigxina se-uterine, ngokwezinga lazo "ukukhanya" kubonakala ngokuphawulekayo phakathi kwezicubu ezizungezile, ezivumela ukusebenzisa i-ultrasound ukuthelekisa ubuninzi besisombululo kunye neziqulatho zesitya (i-bladder izaliswe ngexesha loviwo):
Ukuba ubuchule beembalo ze-fallopian zisezantsi, isisombululo siya kufumaneka ngakwesobunxele nangakwesokudla kumgca wesigaba se-uterine, emva koko siza kudibanisa kwisigxina se-utero-rectal into eyodwa.
Ukuba ukuphazamiseka kubonakala kwiindawo zamapullary ze-tublopian tubes, isisombululo esiyinyumba sisezintanjeni ze-fallopian ngendlela yohlobo lwe-retort-like cavity formations.
Ukuba emva kokusungulwa kwesisombululo ama-tublopian tubes ayibonakali, kodwa isigxina se-uterine siye sanda ngenxa yesisombululo esicatshulwayo, ngoko kusenokuthiwa ngokunyuka kweendawo eziphakathi kwamathambo e-fallopian.
Ukuba ama-tublopian tubes ajongwa ngamabini amabini (akukho ngaphezulu), oku kubonisa ukufakwa kwendawo ye-isthm ye-tublopian tubes.
Ukuba isisombululo asibonakali kwisigxina se-utero-rectal, ke oku kubonisa ubukho be-occlusion of tublopian tubes of locality.
Le ndlela yokuxilonga iqhubekile ngomhla wesihlanu ukuya kwinyanga yesishiyagalolunye yomjikelezo wokuya esikhathini (i-GHA iyenziwa ukuba umjikelezo unemihla engamashumi amabini anesibhozo). Ukuba ibhinqa elinesicwangciso sokukhulelwa kwintsholongwane, ke akunakwenzeka ukuba ungabandakanyi ukukhulelwa kwisigaba sesibini somjikelezo, njengokuba phakathi kwimijikelezo, kwaye ukwenza inkqubo kungabangela ukuphulwa kwenkqubo yemvelo. Ukuba umfazi uthintela ukukhulelwa, i-GHA inokwenziwa nanoma yimaphi umjikelezo, ngaphandle kweentsuku zokuhamba. Ngaphambi kokuba ibhinqa liye kwi-GHA, idlulisa uvavanyo lwe-syphilis, i-HIV, i-hepatitis C ne-B. Kwakhona, umfazi uthatha i-smear kwi-flora ukuqinisekisa ukuba i-microflora yesisu iqhelekile.
Inkqubo eyenziwa kwisigulana, ngokuqhelekileyo ngaphandle kokusetyenziswa kwamachiza enhlungu. I-contrast substance injected in the cervix kwaye ukuba yonke into iyinto eqhelekileyo, i-uterine cavity, kunye nezibilini ze-uterine, ziya kuzaliswa nale nto kwaye iya kuphuma emiphelweni engaphephekanga. I-X-ray ithathwa kulo mzuzwana, kuphela ukuze ukwazi ukubona umgudu wamathambo kunye nesisu. Inqubo isebenzisa izinto ezihlukeneyo zamanzi ezinqamlezileyo-i-verografine, i-triombrast.
Ukuba kuphela kubonakala ubumbano lwe-uterine, ngoko siyakwazi ukuthetha ngokukhazamiseka kweendawo eziphakathi kwamathambo e-fallopian.
Ukuba izibilini ze-uterine kunye nesibindi zibonwa, eziyokuqala zibe ngamasentimitha amabini (akukho ngaphezulu), ngoko siyakwazi ukuthetha ngokukhazamiseka kwezicwangciso zesigxina se-tublopian tubes.
Ukuba ama-tublopian tubes ayabonakala yonke indawo-ukungaphumeleli kwamacandelo e-ampullar yee-tublopian tubes. Ukongezelela, iibhubhu ezikhohlakeleyo zinganakwandiswa. Ukuba kukho ukuphazamiseka kwimihlaba yesistim, i-interstitial okanye i-ampullar kwisigxina sesisu, akukho sichasiso esahlukileyo.
Xa uqhuba i-laparoscopy, ubuchule bee-fallopian tubes zihlolwe. Ngenxa yale njongo, isisombululo (isisombululo se-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka) sisetyenziselwa kwisigidi somlomo wesibeleko. Ingqungquthela yelwelo ngokusebenzisa iibhulo zokuguqulwa lilawulwa yikhamera (iphinda ingenelele) kwimodi yanamhlanje. Ixabiso lokuxilonga ekuhloleni ubuchule okanye ukuphazamiseka kwamathambo okulala nge-laparoscopy ngokuqhelekileyo i-100%. I-laparoscopy iya kubona umgangatho wonakalo kwaye iphelise isizathu salesi simo.
Ukukhulelwa kuthatha njani iinyanga ezili-9?
Ukugcoba iintlobo kubasetyhini abakhulelweyo
Magne B6 ngexesha lokukhulelwa: umyinge, ukuphononongwa, ukufana nokufana
Utywala kwiinyanga zokuqala zokukhulelwa
Ukukhulelwa kwe-Cytomegalovirus nokukhulelwa
Izindlela zanamhlanje zokukhulelwa kwabafazi
Indlela yokucwangcisa ngakumbi ukukhulelwa
Imifanekiso emihle kunye noMaslenitsa 2018: ngokuvuyisana kwaye ngaphandle kombhalo
O, yonke into! Ukudansa u-Anastasia Volochkova utshitshise i-Instagram, ividiyo
Iinkqubo zokuzicoca nge-hyaluronic acid
Intsikelelo yephupha ngokumanga nomfana
Umfazi kwisigidi: ukuqokelela i-capsule I-Maltseva Style S / S 2017
Ziziphi ezinye amadoda ezicaphukisayo kwabasetyhini
Indlela yokunyamekela ubuso: ubisi lwezonyango?
Ukutya kwemichiza - indlela entsha yokuvisisana
Iprokhor Chaliapin noLarisa Kopenkina bahleka ekuzaleni u-Anna Kalashnikova
Ngaba ndiyakwazi ukuphepha izifo eziqhelekileyo kwi-kindergarten?
Umxholo we-caloric weeprotheni, amafutha kunye nee-carbohydrate
Indlela yokukhetha i-jacket esemgangathweni
Iingcebiso zengqondo: indlela yokuphazamiseka kwiingcinga ezimbi
Ingqungquthela engcwele njengesizathu seqhekeza: umtshato kaRudkovskaya kunye no-Plushenko utshitshile amanethiwekhi omntu, iifoto kunye namavidiyo
Ukubunjwa kwejaji yomboniso "Izwi-5": ngubani oza kuba ngabacebisi beprojekthi?
Iindlela zokupheka ezihle kakhulu ekhaya
Ukususwa kweenwele zekhaya
I-Profiteroles nge-sauce ye-chocolate